Ahoana ny hahazo Free ampy System From Harbortouch | Golden Web Awards
ny Darin Carter | Web 13, 2018 | Inspira Digital Marketing Agency | 0 fanehoan-kevitra
The pos (Point ny Sale) System dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ampahany amin'ny antsinjarany sy ny trano fisakafoanana orinasa, tato ho ato. Manana ny rafitra pos namboarina manokana ny boky firaketana ny vola dia manampy anao hahazo ny tsipiriany rehetra varotra tatitra. Noho izany, dia ho lehibe ny cashier ary koa ny bola. Ity rindrambaiko pos dia manampy anao handinika ny tsipiriany rehetra toy ny zavatra lafo, fisondrotana eo amin'ny tolotra sy ny zavatra rehetra, fotoana nivarotany sy ny anaran 'ny cashier koa. Manome marina ka noho izany tsy misy vintana ny fahadisoana. Afaka mahazo maimaim-poana avy any Harbortouch pos rafitra ho an'ny retails, Salons, toeram-pisakafoanana mihidy ary koa na orinasa madinika.
Inona Harbortouch Manaova?
Harbortouch manome anao feno rafitra pos vahaolana. Izany dia ahitana ny fitaovana pos, Pos rindrambaiko ary koa ny mpivarotra Integrated tolotra ny tanteraka ho an'ireo orinasa madinika, Varotra antsinjarany, Salons sy ny toeram-pisakafoanana na café. Tsy maintsy mandany ora maro eo amin'ny fikarohana momba izay ilainao noho ny raharaham-barotra. Harbortouch manontany anao ny sasany fototra fanontaniana ary tsy maintsy mamaly fa. dia, izy ireo dia hahafantatra izay karazana rafitra tena mila anao noho ny raharaham-barotra na fivarotana. Miaraka amin'ny saram kely dia kely dia afaka mahazo mafy ny fanompoana azy.
Harbortouch dia manome rafitra pos misaraka noho ny raharaham-barotra isan-karazany ilaina. Afaka mifidy ny tsara indrindra izay mifototra amin'ny karazana raharaham-barotra ianao. Tsirairay dia manana ny rafi-pos lafin-javatra samy hafa izay manarona samy hafa sy ny zavatra ilaina manokana takian'ny izany raharaham-barotra. Noho izany, tsindrio eo amin'ny de Started for Free 'safidy, ary valio ny fanontaniana sasany dia manontany. Eto dia hanontany anao momba ny karazana raharaham-barotra no manana toy ny akanjo na kiraro, hotely na trano fisakafoanana, Salon na ny mpivarotra sns. Rehefa nahavita namaly ny fanontaniana rehetra, dia Mandefa ny fampiharana setup malalaka.
Ahoana no To Get The Free ampy System?
Tsy dia tena mora ny mahazo ny rafitra pos maimaim-poana noho ny Varotra antsinjarany sy ny toeram-pisakafoanana avy Harbortouch. Tsy maintsy manaraka ny sasany tsotra sy mora dingana mba haka azy. Ireo dia:
Contact Harbortouch: Tsy maintsy aloha hifandray ny Harbortouch noho ny rafitra pos mahazo maimaim-poana. fa izay, tsy maintsy mampihatra ny hevitra malalaka ny fivarotana tolotra. Get Fankatoavana: Rehefa nampihatra ny maimaim-poana ho teboka ny rafitra fivarotana, tsy maintsy miandry ny fankatoavana. Rehefa nekena hatao ho an'ny rindrambaiko maimaim-poana sy ny fitaovana, tsara ianao handeha. Ianao fotsiny tsy maintsy mandoa ny sarany isam-bolana izay manarona ny fanohanana sy ny services.Free Installation: Ho hahazo maimaim-poana avy amin'ny Harbortouch fametrahana ao amin'ny Elite araka ny laza teknisiana. Ny teknisianina rehetra izy ireo tsara ofana hampahafantatra. Noho izany, dia hahazo lehibe sy miray volo fanompoana.
Miaraka fa ho androm-piainany ihany koa ny hahazo fiantohana ny fitaovana. Tsy misy hafa upfront vola lany. Hahazo fametrahana onsite maimaim-poana, sakafo maimaim-poana fandaharana maimaim-poana koa ny taratasy ilaina. Rehefa efa izany nametraka, dia hahazo ny tsara indrindra ny fanohanana avy amin'ny tehina.
Nahoana To Mifidiana ity?
Mifidy malalaka ny fivarotana teboka rafitra avy Harbortouch dia hanampy anao amin'ny fomba maro. Tsy voatery mandany ora fikarohana ny asa tsara indrindra manome pos rindrambaiko sy ny fitaovana. Harbortouch manome anao ny tsara indrindra ao am-pianarana Sale Point ny rafitra ho an'ny Varotra antsinjarany, trano fisakafoanana, Salon sy ny Spas, orinasa madinika sy hotely fisakafoana. Izany no tena manahirana-maimaim-poana ny fanompoana izay azonao ve mahazo. Ianao fotsiny mampihatra ny fandaharana an-tserasera. Ianao, dia handray ny pos miaraka amin'ny fitaovana maimaim-poana ary tsy misy upfront fametrahana vola. Na dia ny volana asa fanompoana sy ny fanohanana saran'ny izay dia tsy maintsy mandoa dia tena kely. Kely dia kely io sarany dia handrakotra ny asa manan-danja.
Raha toa ianao ka manana raharaham-barotra, ary mitady ny tsara indrindra sy ny rafitra mahomby indrindra pos, Harbortouch dia afaka manome anao izany. Afaka mampihatra ny maimaim-poana ho an'ny rafitra pos natolotry ny azy ireo. Izany dia ahitana ny rindrambaiko maimaim-poana sy ny fitaovana mifototra amin'ny ny raharaham-barotra. Izany koa dia avy amin'ny lafiny rehetra, ny manan-danja ilaina ho mihazakazaka ny raharaham-barotra sy fandinihina tsara ny varotra hampandeha tsara. Noho izany, mamonjy izany be dia be ny fotoana sarobidy ary koa ny vola. Harbortouch dia afaka mikarakara ny rafitra rehetra pos zavatra ilaina sy zavatra takiana mahomby.